Zithini izibonelelo ze-CBD? | Eyona nketho yeMpilo ilungileyo yowama-2020
Izibonelelo zeoyile ye-CBD
Izibonelelo ezininzi zeoyile ye-CBD exhaswa bubungqina
I-Cannabidiol okanye i-CBD njengoko isaziwa ngcono yinto eyaziwayo kule mihla. Izibonelelo ze https://trytranquil.net/product/cbd-roll-on/ zininzi kwizifo ezininzi eziqhelekileyo. I-CBD yenye yee-cannabinoids ezingaphezu kwe-100 ezifumaneka kwi Izityalo zeCannabis sativa.
I-Tetrahydrocannabinol (i-THC) yeyona nto iphambili kwi-cannabinoid efumaneka kwi-cannabis, yeyona nto iphambili kwentsangu kwaye ibangela imvakalelo yokufumana "phezulu." Ngokungafaniyo ne-THC, i-CBD ayisebenzi ngengqondo. Olu phawu lwenza ukuba i-CBD ibe lukhetho olunomtsalane kwabo bafuna isiqabu ngaphandle kokutshintsha kwengqondo kwentsangu. Ioyile ye-CBD yenziwa ngokutsala i-CBD kwizityalo ze-cannabis, emva koko uyixovule ngeoyile yenethiwekhi njengeoyile yekhokhonathi okanye ye-hemp.
I-CBD iphelisa iintlungu: Emzimbeni womntu, kukho inkqubo ebizwa ngokuba yi-Endocannabinoid system, elawula imisebenzi eliqela kubandakanya ukutya, ukulala kunye nokuphendula kwamajoni omzimba. Umzimba uvelisa ii-neurotransmitters ezibizwa ngokuba zi-endocannabinoids ezinxulunyaniswa ne-cannabinoid receptors kwinkqubo yeemvakalelo. Ngokophando, i-CBD inceda ukunciphisa iintlungu ezingapheliyo ngokuchaphazela umsebenzi wee-endocannabinoid receptors ezinciphisa ukudumba kunye nokunxibelelana neeurotransmitters.
I-CBD inokunciphisa uxinzelelo kunye noxinzelelo: Ukuxhalaba kunye nokudakumba kuhlala kunyangwa ngamachiza, anokubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezininzi kubandakanya ukuphazamiseka, ukozela, ukungasebenzi ngokwesondo, ukungalali, kunye nentloko. Kuyenzeka ukuba i-https: //trytranquil.net/product/cbd-roll-on/ i-oyile ibe lunyango loxinzelelo kunye noxinzelelo, inike abo bahlala nezi ngxaki ithuba lokufumana isisombululo sendalo. I-CBD inokusetyenziselwa ukunyanga ukuqaqanjelwa yi-PTSD. Ezi zibonelelo zeoyile ye-CBD zinxulunyaniswe nokukwazi kwe-CBD ukusebenza kwii-receptors ze-serotonin, i-neurotransmitter elawula imeko-bume kunye nokuziphatha ekuhlaleni.
I-CBD inokuba neempawu ze-Neuroprotective Properties: Izazinzulu zikholelwa ukuba esinye sezibonelelo zeoyile ye-CBD kukuba ukubanakho ukusebenza kwinkqubo ye-endocannabinoid kunokuba luncedo kubantu abanengxaki yokuphazamiseka kwemithambo-luvo. Ngokwenyani, lolunye lolona phando lusetyenziswayo lwe-CBD kunyango lweengxaki ze-neurological ezifana nokuxhuzula kunye ne-multiple sclerosis. Nangona izifundo kule ndawo zintsha, izifundo ezininzi zibonise iziphumo ezithembisayo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ukhankanye ukuba abanye abantu kwezi zifundo banamava eziphumo ezinxulumene nazo Unyango lwe-CBD, ezinje ngomkhuhlane, ukudinwa, kunye nokuxhuzula. CBD kunye Delta 8 THC kwiBulk kuye kwafundwa malunga neepropathi ezinokubakho ekunyangeni ezinye iingxaki zengqondo.
I-CBD inokunciphisa iimpawu ezinxulumene nomhlaza: Esinye sezona zibonelelo ziphikisayo ze-oyile ye-CBD kukuba inokunceda ngeempawu ezinxulumene nomhlaza. Yintoni eqinisekileyo, nangona kunjalo kukuba i-CBD inokunceda abantu abanesifo somhlaza ukuba baphathe iziphumo ebezingalindelekanga ezinxulumene nonyango lomhlaza, njengesicaphucaphu, isiyezi kunye nentlungu. Kuthiwa i-CBD inokuba neempawu zokulwa nomhlaza. Nangona kunjalo, abukho ubungqina bokuba okwangoku. Olunye uphando luya kufuneka ukuze kungqinwe ukusebenza kwalo.
I-CBD inokunceda ekunciphiseni amabala: Amabala yimeko yesikhumba echaphazela malunga ne-10% yabemi. Kubangelwa zizinto ezahlukeneyo, ibacteria, ukudumba kwedermis, ukuveliswa kakhulu kwe-sebum, kunye nemfuza. Ngokophando lwenzululwazi lwakutsha nje, esinye sezibonelelo zeoyile ye-CBD kukuba inokunceda ukunyanga induna ngenxa yeempawu zayo ezichasayo kunye nokukwazi ukunciphisa imveliso ye-sebum.
I-CBD inokuba luncedo kwimpilo yentliziyo: Izifundo zamva nje zidibanise i-CBD kunye nezibonelelo ezininzi zentliziyo kunye nenkqubo yokujikeleza, kubandakanya nokukwazi ukunciphisa uxinzelelo lwegazi. Uxinzelelo lwegazi oluphezulu lunxulunyaniswa nemingcipheko ephezulu yeemeko zentliziyo, kubandakanya ukubetha kwentliziyo kunye nokuhlaselwa sisifo sentliziyo. Uphando lubonisa ukuba i-CBD inokunceda ngoxinzelelo lwegazi oluphezulu.
Ezinye izibonelelo ezinokubakho zeoyile ye-CBD: Nangona uphando oluninzi luyafuneka, i-CBD inokubonelela ngezinye izibonelelo.
Unyango ngokuchasene nokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi: I-CBD icingelwa ukuba iguqula imijikelezo yobuchopho enxulumene neziyobisi.
Iziphumo ze-Antipsychotic: I-CBD inokunceda abantu abane-schizophrenia kunye nezinye iingxaki zengqondo kunye nokunciphisa iimpawu zengqondo.
Uthintelo lweswekile: Kwizifundo ezineempuku, i-CBD yehlise izehlo zesifo seswekile ngaphezulu kwe-50%.
Okulandelayoelilandelayo:I-CBD kunye neswekile-Sebenzisa ioyile ye-CBD ekuvuseleleni iswekile yegazi | Eyona mveliso i-2021